Anglegrindercare | Pejy fenoina
Ahoana no ahalalana fa misy tsy fetezana ny Meuleuse d’Angle-anao:
1. Mariho raha isan’ireo môdely misy tsy fetezana ny fitaovana anananao:
Mety misy tsy fetezany ireto môdely manaraka ireto: Meuleuse d’ Angle Séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 sy PWS 2000 vita Rosia. Jereo fa voamarika amin’ilay fitaovana anananao ny môdely misy azy (araho izay voatondro araka ity sary manaraka ity dia ho hainao ny mamantatra izany).
Raha manana fitaovana mitovy môdely amin’ireo voasoratra ireo ianao dia isan’ireo misy tsy fetezana ilay fitaovana ampiasainao. Araho ny fitsipika faha 2 ary mariho raha misy tsy mety ilay izy. Tsy voakasik’ity filazana ity kosa ny fitaovana ampiasainao raha tsy anisan’ireo môdely voalaza etsy ambony ireo. FANAMARIHANA: Ireo manana fitaovana môdely GWS 24-230 JVX Professionnel misy hisatra, na oviana na oviana ny daty nanamboarana azy, kanefa nasiana fanamboarana tao anelanelan’ny volana Janaary ka hatramin’ny Novambra 2016 dia iangaviana mba hiantso avy hatrany ny nomerao fandraisana fitarainana.
2. Mariho raha misy tsy fetezana ny fitaovanao:
Ampidiro ny nomerao amantarana ilay Meuleuse d’Angle sy ny numéro de série-any amin’ity pejy fanamarihana fitaovana manaraka ity. Tsy maintsy fenoina daholo ireo fizarana roa ireo. Tsy maintsy fenoina daholo ireo fizarana roa ireo.
Numerao an’ilay fitaovana
Misy tsy fetezana ny Meuleuse d’Angle ampiasainao. Koa satria mampidi-doza ny fandefana izany dia tsy azonao ampiasaina intsony ilay fitaovana, na koa hoe omena olon-kafa. Raha hanolo ilay fitaovana, antsoy izahay amin’ny !!!!!LINK.
TSY MISY atahorana ny Meuleuse d’Angle ampiasainao.
Azonao tohizana ny fampiasana azy.